Kolontsaina Malagasy – Blaogin'i Voniary
Étiquette : Kolontsaina Malagasy
Efa telopolo taona mahery no nonina tany an-dafy i Dominique Ramarlah. Hatramin’izao anefa dia mbola teny malagasy sy foto-pisainana malagasy no entiny mieritreritra. Raim-pianakaviana tia manao soa sy mizara ihany koa izy. Izany no nahatonga azy ho mpikatroka eo amin’ny sehatry ny fanabeazana sy ny fandrosoana lovainjafy. Namoaka boky momba ny kolontsaina Bara sy ny... Lire la Suite →
Raha manana ny IFM ny frantsay eto amintsika, tsy ambakan’izany koa isika tompon-tanindrazana manana ny Ivon-toeran’ny Kolontsaina Malagasy na IKM. Manandratra ny kolontsaina Malagasy amin’ny endriny rehetra sady misokatra amin’ny hafa no tanjon’ny IKM. Tsarovy fa ny fainanao ny kolontsainao no antoka iray hampamiratra azy eo anivon’ny fanatontolona ary hampandroso ny firenenao ihany koa .... Lire la Suite →
Poeta manan-talenta, kiady sy reharehan’ny KOLONTSAINA MALAGASY AVY ANY AVARATRA raha i Momo Jaomanonga. Sarotiny fatratra amin’ny fanajana ny SOATOAVINA MALAGASY izy ary tsy ventesiny amin’ny tononkalony fotsiny izany fa iainany isan’andro ihany koa. Na teo aza ireo sedra maro nolalovany dia nanonga hatrany izy ary tsy nitsahatra nanoratra. Ny fandrosoana, ny fiainana andavanandro ary... Lire la Suite →